December 2019 - khitalinmedia
မူးလာရဲ့ (၂၁) နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ အတွက် သိန်း(၁၀၀)နီးပါးတန်ဖိုးရှိ နောက်ဆုံးပေါ်ပစ္စည်းတွေ လက်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ မူလီများ
December 26, 2019 Khitalin Media 0
မူးလာရဲ့ (၂၁) နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ အတွက် သိန်း(၁၀၀)နီးပါးတန်ဖိုးရှိ နောက်ဆုံးပေါ်ပစ္စည်းတွေ လက်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ မူလီများ အပြုံးချိုချိုလေးနဲ့ ပရိသတ်တွေကို အမြဲတမ်း ပြုံးပျော်စေတဲ့ Myanmar Idol ပြိုင်ပွဲဝင် မူးလာက Grand Final ကို တက်ရောက်ခွင့် မရရှိခဲ့တဲ့ ပြိုင်ပွဲကနေ ထွက်ခွာခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် […]
စာပို့ရင် “reply” တစ်ခါပြန်ဖို့ အသက်တိုအောင်စောင့်ရတဲ့ ရာသီခွင် (၃)ခု
ကိုယ့်ဘက်က မက်ဆေ့ပို့လိုက်ရင် ချက်ချင်းမပြန်တတ်တဲ့ချစ်သူ၊ သူငယ်ချင်းမျိုးတွေရှိတာ တော်တော်လေးသည်းခံရ၊ စိတ်ရှည်ရပါတယ်။ သူတို့ကတော့ ဘာရယ်မဟုတ် မက်ဆေ့ဝင်လာရင် ဒီတိုင်းဖတ်ပြီး ဘာမှပြန်မပြောဘဲနေနိုင်ပေမယ့် ဒီဘက်ကလူကတော့ reply မလာမချင်း စိတ်တိုနေရတတ်ပါတယ်။ ကဲ.. အဲ့ဒီလိုမျိုး reply မပြန်ဘဲ နေနိုင်လွန်းတဲ့သူတွေက ဘယ်သူတွေများလဲလို့ ကြည့်လိုက်ရအောင် ။ Aquarius ( […]
ထီ သိန်း ၁၅၀၀၀ ပေါက်သွားစေတဲ့ ထီပေါက်ဂါထာ ကိုမျှဝေပေးလိုက်တဲ့ အဖွား
ထီ သိန်း ၁၅၀၀၀ ပေါက်သွားစေတဲ့ ထီပေါက်ဂါထာ ကိုမျှဝေပေးလိုက်တဲ့ အဖွား အစွမ်းထက်မြက်တဲ့ ထီပေါက်ဂါထာကို ထီပေါက်တဲ့ အဖွားပေးခဲ့တဲ့ မင်္ဂလာပါ သူဌေးမင်း ထီဆိုင်ကြီးမှ ကူးယူ ဖော်ပြအပ်ပါတယ်။ အစွမ်း ထက်မြက်တဲ့ ထီပေါက်ဂါထာ ရှေးကျမ်းရင်း တစ်စောင်မှာ ဖော်ပြထားပြီး အစွမ်း ထက်မြက်တဲ့ ထီပေါက်ဂါထာ […]
နေကြပ်နေပီဗျို့ ယနေ့ နံနက် 10နာရီကနေ နေ့ခင်း 1နာရီအထိ (Video)
နေကြပ်နေပီဗျို့ ယနေ့ နံနက် 10နာရီကနေ နေ့ခင်း 1နာရီအထိVideo ကို အောက်ဆုံးမှာကြည့်ရန် အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာ အခု 26.12.2019 နေ့ 11နာရီ ဆယ်မိနစ်လောက်မှာ နေကျပ်သွားပါတယ်။ တစ်ချို့ကလည်း မမြင်လိုက်ရဘူး မသိဘူးလို့ပြောပါတယ်။ တစ်ချို့ကတော့ လည်း သိလိုက်ရတယ်လို့ပြောကြပါတယ် ယနေ့ နံနက်ပိုင်း 10နာရီကနေ စတင်ပီးကျပ်နေတာဖြစ်ပီး […]
မုန့်ဟင်းခါး ထဲ လူတိုင်းလိုလို ထည့်စားတတ်တဲ့ အကြော် ရဲ့ ကြောက်မက်ဖွယ်ရာ
မြန်မာတွေကြိုက်လှတဲ့ မုန့်ဟင်းခါး မှာ ပါတဲ့ အကြော် ဘယ်လောက်ကြောက်ဖို့ကောင်းလဲ ဒီနေ့ မြောက်ပြင်ဘက်သွားရင်း မုန့်ဟင်းခါးသည်မြင်တော့ ဗိုက်ဆာတာနဲ့ ဝင်စားမိတယ်… အရမ်းကြိုက်တာလဲ ပါတာပေါ့…. ဟယ် ကောင်းတယ် ကောင်းတယ်ဆိုပီး အကြော်ပိုလေးနဲ့ ဟင်းရည်လေးတောင် တောင်းသောက်လိုက်သေးတယ်…. အကြော်လေးကကောင်းလိုက်တာဆိုပီး အကြော် လေး ၂၀၀ဖိုး အပိုရောင်းပေးပါဆိုပီး စားမိတော့ […]
ရည်းစားဟောင်းကို သတိရပြီးငိုခြင်းက ကိုယ်အလေးအချိန်ကျစေနိုင်ကြောင်းလေ့လာချက်များတွေ့ရှိ
လူတစ်ယောက်ဟာ သူ့ရဲ့တစ်သက်တာမှာ ပျမ်းမျှအားဖြင့် မျက်ရည် 16.5 ဂါလန်ခန့် ငိုတယ်လို့ သိပ္ပံပညာရှင်တွေက ပြောပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူတွေက ငိုရတာထက် ခံစားချက်တွေကို မျိုသိပ်ထားရတာကို ပိုပြီးသဘောကျပါတယ်။ စိတ်ခံစားရလို့ ငိုခြင်းက ကိုယ်အလေးချိန်မြင့်တက်မှုကို ဟန့်တားပေးတယ် ဆိုရင် သင် ယုံနိုင်ပါ့မလား စိတ်ခံစားရလို့ ငိုတဲ့အခါ ကိုယ့်အတွက် […]
နိုငျငံတကာက ဗုဒ်ဓဘာသာကို အလှနျစိတျဝငျစားနကွေပွီ
ဆလိုဗက်ကီးယား တရားပွဲ ဆလိုဗက်ကီးယား နိုင်ငံကတရားပွဲ ပါတဲ့ နိုင်ငံတကာက ဗုဒ္ဓဘာသာကို အလွန်စိတ်ဝင်စားနေကြပြီ… ကျွန်နော်တို့ တတွေ ရန်ဖြစ်နေဖို့မသင့်တော့ဘူးထင်တယ် တက်ညီလက်ညီနဲ့နိုင်ငံတကာကို မိမိတို့ နိုင်တု့ဘက်ကနေ ထိုးဖေါက်မယ်ဆိုရင်…. တကမ္ဘာလုံး တရားတော်တွေကို ထိတွေ […]
မိန်းကလေးများ ပျက်စီးရတဲ့ အကြောင်းအရင်း ( ၉ ) မျိုး
“ မိန်းကလေးများ ပျက်စီးရတဲ့ အကြောင်းအရင်း ( ၉ ) မျိုး ” တချို့မိဘတွေက သူတို့ သမီးပျိုလေးများကို မပျက်စီးအောင် ဘယ်လို ဆုံးမပေးရမလဲ …? ဘယ်လိုပြုလုပ် သင့်ပါသလဲ လို့ မေးလာကြတဲ့ အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ ဟောကြားခဲ့တဲ့ မိန်းကလေးများ ပျက်စီးခြင်း(၉)မျိုးကို […]
အောက်လမ်းပညာနဲ့ ပြုလုပ်​ခံထားရရင်တောင် ပြန်ပွင့်စေတဲ့နည်း…
အောက်လမ်းပညာနဲ့ ပြုလုပ်​ထားသည့်တိုင် ပိတ်နေတဲ့ကံ ပြန်ပွင့်လာစေမည့် အစွမ်းထက်သည့်နည်း ဖန်​ခွက် ၂ခွက်​ ထဲ ဆား ပြည့်​ ထည့််​ သံပရာသီး အဝါ ၁လုံးစီး တင်​ ​အရိုးတံပါ ငရုပ်​သီးအ​ခြောက်​ အ​တောင့်​ ရှည်​ ၁​တောင့်​ စီ စိုက်​ အိမ်​တံခါး အတွင်း ဘက်​ […]
တစ်ပတ်အတွင်း ပြောင်းလဲမည့် သင့်ကံကြမ္မာ အဆိုးအကောင်းများ
ဒီဇင်ဘာလ ၂၄ ရက်နေ့မှ ဒီဇင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့အထိ ဆရာစံဇာဏီဘို၏ ခုနှစ်ရက်သားသမီးများအတွက် တစ်ပတ်စာကံကြမ္မာကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည်။ တနင်္ဂနွေနေ့ မွေးသူများ စိတ်ကူးသစ်နှင့် လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မည်။ လမ်းသစ်ထွင်ပြီး လုပ်ကိုင်ခြင်းမှ အဆင့်မြင့်တိုးတက်မှုရမည်။ ကိုယ်ပိုင်အတွေးအခေါ်နှင့် ဆောင်ရွက်မှုကို ဦးစားပေးပါ။ တစ်ပါးသူစကား နားယောင်၍ ဦးတည်ချက် ပြောင်းလုပ်က အမှားကြုံတတ်သည်။ […]